ကိုရီးယားဇာတျကားတှမှော အသုံးမြားတဲ့ စကားစုလေးမြား (၁)
ကိုရီးယားဇာတျကားတှမှော အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့ စကားစုလေးမြား (၁)
1. 장난해? (jangnanhae) – Are you kidding me?
“မငျးငါ့ကိုနောကျနတောလား” . . . ဒီစကားလေးကတော့ သူငယျခငျြးတှအေကွား၊ သကျတူရှယျတူတှအေကွား၊ ကိုယျ့ထကျငယျရှယျသူတှအေကွားမှာ အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့ စကားလေးပါပဲ။
ကိုရီးယားဇာတျကားလေးတှကေိုကွညျ့ရငျသိမှာပါ။ ဒီစကားကို ကိုယျ့ထကျအသကျအရှယျကွီးသူတှေ၊ ရာထူးကွီးသူတှကေို ဘယျတော့မှ ပွောလမေ့ရှိပါဘူးနျော။
ဒီစကားလေးကတော့ စကားရပျတဈခု၊ အကွောငျးအရာတဈခုကို အတိအကြ မသိတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့စကားလေးပါပဲ။ “혹시 (hoksi) means ‘by any chance’ or ‘maybe.’” အခှငျ့အရေးတဈခုအနကေတော့ . . ၊ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ . . . စသဖွငျ့ဆိုလိုပါတယျ။
ဒါကတော့ “Konglish” အင်ျဂလိပျစကားကနေ မှေးစားထားတဲ့စကားလုံးလေးတဈခုပါ။ တဈစုံတဈခုကို သဘောတူတဲ့အခါ၊ စိနျချေါမှုတှကေို လကျခံတဲ့အခါ အသုံးပွုတဲ့စကားလေးပါ။ အင်ျဂလိပျစကားလုံး Call နဲ့ အသံထှကျတူပါတယျ။
뻥을 치다 (ppeongeul chida) - လိမျညာတယျလို့အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ 지마 (jima) ဆိုတာကတော့
지 마세요 (ji maseyo) ဆိုတဲ့အမွငျ့စကားကနေ ဆငျးသကျလာတာဖွဈပွီး “do not” “မလုပျနဲ့” လို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ ဒီစကားစုနှဈခုကို ပေါငျးစပျလိုကျတဲ့အခါ “မလိမျနဲ့” “မလိမျပါနဲ့”ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျလေးဖွဈသှားတာပေါ့။
ဒီစကားစုလေးကိုတော့ ဟာသဇာတျကားတှေ၊ ဒရမျမာကားတှမှော မကွာခဏဆိုသလို ကွားနရေတတျပါတယျ။ ဒီစကားစုကိုတော့ လူတဈယောကျက သူ့ရဲ့စဈမှနျတဲ့ခံစားခကျြတှေ၊ ရညျရှယျခကျြတှကေို ဖုံးကှယျခငျြတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုလရှေိ့တယျ။ “နားလညျမှုမလှဲပါနဲ့ကှာ” “တလှဲမထငျပါနဲ့” လို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။
ဒီစကားစုကိုလလေ့ာတဲ့အခါမှာ 오해 (ohae) means ‘misunderstanding.’ “နားလညျမှုလှဲသညျ” ဆိုတဲ့စကားစုနဲ့ 하지 마세요 (haji maseyo)ဆိုတဲ့ အမွငျ့စကားကနဆေငျးသကျလာတဲ့ 하지마 (hajima) ကတော့ “do not” “မလုပျပါနဲ့” ဆိုတာကို ပေါငျးစပျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ “နားလညျမှုမလှဲပါနဲ့”ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျ ထှကျပါတယျ။
6. 이렇게? (ireoke) – Like this?
ဒီစကားစုလေးကတော့ တဈစုံတဈခုကိုပွုလုပျဖို့၊ ဆောငျရှကျဖို့အတှကျ အကွံဉာဏျတောငျးခွငျးပါ။ “ဒီလိုလား” (သို့) “ဘယျလိုလုပျရတာလဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
7. 아싸! (assa) – Oh yeah
“ဟုတျပွီကှ” လို့ အဓိပ်ပာယျပွနျဆိုရမလားပဲနျော။ အခွအေနအေမြိုးမြိုးမှာ အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့စကားစုလေး . . . . တဈစုံတဈခုကို အောငျနိုငျတဲ့အခါ၊ ကံကောငျးတယျလို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျယူဆတဲ့အခါ၊ ထီပေါကျတဲ့အခါ . . . . အစရှိတဲ့အခါမြိုးတှမှော ဝမျးသာပြျောရှငျစှာ အျောဟဈလရှေိ့တဲ့ အာမဋေိတျစကားစုလေးပေါ့။
“သခြောပါတယျ” လို့ ဆိုလိုပါတယျ။ တဈခါတဈရံ စကားစုတှရေဲ့ရှဆေုံ့းမှာ 그럼 (geureom) ကို အသုံးပွုတယျဆိုရငျတော့ ကိစ်စရပျတဈခုရဲ့အခွအေနကေို ရညျညှနျးပွောဆိုတာပါ။ “’ဒီလိုဆိုရငျ . . “ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျနဲ့ အသုံးပွုလရှေိ့ပါတယျ။
ခဏလောကျစောငျ့ပါအုနျးလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ ယဉျယဉျကြေးကြေးပြွောခငျြတယျဆိုရငျတော့ စကားစုရဲ့နောကျဆုံးမှာ 요 (yo) ကို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုဖို့ လိုပါတယျ။
ဒီစကားစုကတော့ တဈစုံတဈဦးရဲ့ အယူအဆ၊ ဒါမှမဟုတျ ထငျမွငျယူဆခကျြကို တောငျးခံတဲ့အခါမှာ ဘယျလိုပွနျပွီးအဖွပေေးရမယျကို စဉျးစားဖို့အခြိနျအနညျးငယျ ရယူလိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့ စကားစုလေးပါ။ “ငါမသိဘူး၊ နပေါအုနျး . . ငါကွညျ့လိုကျအုနျးမယျ” လို့ ဆိုလိုပါတယျ။
11. 어쩔 건데 (eojjeol geonde) – What are you going to do
“နငျဘာတှလေုပျနတောလဲ” ဆိုတဲ့စကားစုလေးကတော့ ကိုယျနဲ့ရှယျတူတှေ၊ ကိုယျ့ထကျငယျတဲ့သူတှနေဲ့ စကားပွောတဲ့အခါ ပွောလပွေ့ောထရှိတဲ့ စကားစုလေးပါပဲ။
လူတဈယောကျက သငျ့ကို အထူးအဆနျးကွညျ့နတေဲ့အခါ ဒီမေးခှနျးကို မေးလရှေိ့ပါတယျ။ “ဘာကွညျ့နတောလဲ” ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျနဲ့ပေါ့။
13. 무슨 소리야 이게? (museun soriya ige) – What are you talking about? / what do you mean?
ထူးထူးဆနျးဆနျးစကား၊ ထူးခွားတဲ့အခါ၊ ရုတျတရကျထှကျပျေါလာတဲ့အသံတှကေို ကွားရတွ့အခါ အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့စကားလေးတဈခှနျးပါ။
무슨 (museun) (뭐 (mwo) / 무엇 (mueot) တို့နဲ့အဓိပ်ပာယျတူပါတယျ။) ‘what.’ “ဘာလဲ”လို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။
소리 (sori) (‘saying’ or ‘mean’ )ကတော့ အသံ ဖွဈပွီး이게 (ige) (‘this.’)ကတော့ ဒီဟာ လို့ အဓိပ်ပာယျရတဲ့အတှကျ ဒီအသံက ဘာလဲ၊ ဒီစကားက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ဘာပွောတာလဲ . . . ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။
14. 어떻게? (eotteoke) – how?
ကိုရီးယားကားမှာ အမြားဆုံးကွားရတဲ့စကားစုလေး၊ ဟုတျတယျဟုတျ။ ဘယျလိုလုပျကွမလဲဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲနျော။
ဒီစကားစုလေးမှာတော့ 하다 (hada | to do) (ပွုလုပျသညျ) + 지마 (jima | command to not do something) (မလုပျပါနဲ့ - NO) ဆိုတဲ့စကားနှဈခုကို ပေါငျးစပျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ မလုပျပါနဲ့၊ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျနဲ့ ပွောဆိုတာဖွဈပါတယျ။
하다 ဆိုတဲ့(ပွုလုပျတယျဆိုတဲ့စကားနရောမှာ) 가다 (gada | to go) ကိုထညျ့သှငျးအသုံးပွုပွီး 가지마 (gajima | don’t go) မသှားပါနဲ့ဆိုပွီးလညျး အသုံးပွုကွပါတယျ။
ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေမှာ အသုံးများတဲ့ စကားစုလေးများ (၁)
“မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား” . . . ဒီစကားလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတွေအကြား၊ သက်တူရွယ်တူတွေအကြား၊ ကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်သူတွေအကြားမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ စကားလေးပါပဲ။
ကိုရီးယားဇာတ်ကားလေးတွေကိုကြည့်ရင်သိမှာပါ။ ဒီစကားကို ကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ၊ ရာထူးကြီးသူတွေကို ဘယ်တော့မှ ပြောလေ့မရှိပါဘူးနော်။
ဒီစကားလေးကတော့ စကားရပ်တစ်ခု၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အတိအကျ မသိတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့စကားလေးပါပဲ။ “혹시 (hoksi) means ‘by any chance’ or ‘maybe.’” အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေကတော့ . . ၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် . . . စသဖြင့်ဆိုလိုပါတယ်။
ဒါကတော့ “Konglish” အင်္ဂလိပ်စကားကနေ မွေးစားထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ်ခုကို သဘောတူတဲ့အခါ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို လက်ခံတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့စကားလေးပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး Call နဲ့ အသံထွက်တူပါတယ်။
뻥을 치다 (ppeongeul chida) - လိမ်ညာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ 지마 (jima) ဆိုတာကတော့
지 마세요 (ji maseyo) ဆိုတဲ့အမြင့်စကားကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး “do not” “မလုပ်နဲ့” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီစကားစုနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ “မလိမ်နဲ့” “မလိမ်ပါနဲ့”ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဒီစကားစုလေးကိုတော့ ဟာသဇာတ်ကားတွေ၊ ဒရမ်မာကားတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ကြားနေရတတ်ပါတယ်။ ဒီစကားစုကိုတော့ လူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ချင်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတယ်။ “နားလည်မှုမလွဲပါနဲ့ကွာ” “တလွဲမထင်ပါနဲ့” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ဒီစကားစုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ 오해 (ohae) means ‘misunderstanding.’ “နားလည်မှုလွဲသည်” ဆိုတဲ့စကားစုနဲ့ 하지 마세요 (haji maseyo)ဆိုတဲ့ အမြင့်စကားကနေဆင်းသက်လာတဲ့ 하지마 (hajima) ကတော့ “do not” “မလုပ်ပါနဲ့” ဆိုတာကို ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် “နားလည်မှုမလွဲပါနဲ့”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ထွက်ပါတယ်။
ဒီစကားစုလေးကတော့ တစ်စုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့၊ ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အကြံဥာဏ်တောင်းခြင်းပါ။ “ဒီလိုလား” (သို့) “ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
“ဟုတ်ပြီကွ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုရမလားပဲနော်။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့စကားစုလေး . . . . တစ်စုံတစ်ခုကို အောင်နိုင်တဲ့အခါ၊ ကံကောင်းတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယူဆတဲ့အခါ၊ ထီပေါက်တဲ့အခါ . . . . အစရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်စွာ အော်ဟစ်လေ့ရှိတဲ့ အာမေဋိတ်စကားစုလေးပေါ့။
“သေချာပါတယ်” လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ စကားစုတွေရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာ 그럼 (geureom) ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုရဲ့အခြေအနေကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုတာပါ။ “’ဒီလိုဆိုရင် . . “ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
ခဏလောက်စောင့်ပါအုန်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေျးပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စကားစုရဲ့နောက်ဆုံးမှာ 요 (yo) ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီစကားစုကတော့ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ အယူအဆ၊ ဒါမှမဟုတ် ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တောင်းခံတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပြန်ပြီးအဖြေပေးရမယ်ကို စဉ်းစားဖို့အချိန်အနည်းငယ် ရယူလိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ စကားစုလေးပါ။ “ငါမသိဘူး၊ နေပါအုန်း . . ငါကြည့်လိုက်အုန်းမယ်” လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
“နင်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ” ဆိုတဲ့စကားစုလေးကတော့ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတွေ၊ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ စကားစုလေးပါပဲ။
လူတစ်ယောက်က သင့်ကို အထူးအဆန်းကြည့်နေတဲ့အခါ ဒီမေးခွန်းကို မေးလေ့ရှိပါတယ်။ “ဘာကြည့်နေတာလဲ” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေါ့။
ထူးထူးဆန်းဆန်းစကား၊ ထူးခြားတဲ့အခါ၊ ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အသံတွေကို ကြားရတြ့အခါ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းပါ။
무슨 (museun) (뭐 (mwo) / 무엇 (mueot) တို့နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်။) ‘what.’ “ဘာလဲ”လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
소리 (sori) (‘saying’ or ‘mean’ )ကတော့ အသံ ဖြစ်ပြီး이게 (ige) (‘this.’)ကတော့ ဒီဟာ လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက် ဒီအသံက ဘာလဲ၊ ဒီစကားက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ၊ ဘာပြောတာလဲ . . . ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
ကိုရီးယားကားမှာ အများဆုံးကြားရတဲ့စကားစုလေး၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲနော်။
ဒီစကားစုလေးမှာတော့ 하다 (hada | to do) (ပြုလုပ်သည်) + 지마 (jima | command to not do something) (မလုပ်ပါနဲ့ - NO) ဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မလုပ်ပါနဲ့၊ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
하다 ဆိုတဲ့(ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနေရာမှာ) 가다 (gada | to go) ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီး 가지마 (gajima | don’t go) မသွားပါနဲ့ဆိုပြီးလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။